ဇွန်လ 23, 2011 တွင် 1:06 ညနေ
အဆင့်မြှင့်ရသောအခါငါ parser.php Option အ plugin ကို setting တွင် Configure လုပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလာမယ့်လွှတ်ပေးရန်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုထပ်မံရန်မလိုပါကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်. အလွန်ကြီးသော options များဖြစ်ကြသည်!
ဇွန်လ 23, 2011 တွင် 10:53 ညနေ
မပေးသမျှကို Configure လုပ်လို့ရတဲ့ဖွစျလိမျ့မညျ, ကျွန်တော်သိပ်အများကြီး options များနှင့်အတူအသုံးပြုသူတစ်ဦးလွှမ်းမိုးရန်မရှာအဖြစ်, လည်း – ဒီအချက်တွေကိုမှာဒီဖြစ်ကောင်းမျှော်လင့်သောအရာကိုပိုကောင်းနားလည်ပေးသောပိုမိုအဆင့်မြင့်သည်အသုံးပြုသူများမှဒီ feature စောင့်ရှောက်အခါမျှော်လင့်ထားရန်, ငါကအဓိကအမာခံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့လုံလောက်တဲ့ရင့်ကျက်ဖြစ်တယ်မခံစားရဘူး, ဖြစ်ခြင်းကာလဘို့အနည်းဆုံးမဟုတ်.
ဇွန်လ 24, 2011 တွင် 8:00 နံနက်
ငါ option ကိုအတွက် configuration မှ add ဖို့လုံလောက်တဲ့ရင့်ကျက်မကျမည်အကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ် (မကြာခဏတစ်ဦးအဖြစ်မီးမောင်းထိုးပြကြသည်ဆော့ဖ်ဝဲ configuration options ကိုရှုမြင်သော်လည်း “beta ကို” သို့မဟုတ် “စမ်းသပ်ဆဲ”, စသည်တို့ကို. – ဒါကြောင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာရှိ IS – တောင်မှဖြင့် Transposh အတွက်ပြီးသား) လိုသောမအဖြစ် “လွှမ်းမိုး” အသုံးပြုသူ, အားလုံးကြောင့်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ, ငါဆော့ဖ်ဝဲကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အငြင်းအခုံမဝယ်ကြဘူး. တကယ်တော့, သူတို့ဖြစ်ကြသည်သကဲ့သို့ငါဖြင့် Transposh ရဲ့ရွေးချယ်မှုများတွေ့ရှိရကြောင်းငါမပြောနိုင်ပါဘူး 100% ထင်ရှားသော. ဒါကငါ့ကိုနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး. ငါနားလည်သည်အထိကိုယ့်အချိန်ပြန်လည်ဖတ်ရှုခြင်းဖြုန်း. ငါအမှနျလိုအပျကွောငျးအများကြီး software ကိုတစ်ဦးလူကြိုက်များအယူအဆရှိကွောငျးကိုသိ “အဲ့တာကိုရိုးရှင်းအောင်ထား”, ဒါပေမယ့် function ကို၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှုပ်ထွေးနှင့်အတူလက်-In-လက်သွားသည်. ဒါကနည်းပညာအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ Trade-off င်. ဘာသာပြန်ချက်အပြောင်းအလဲနဲ့မူလကပင်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်. ပိုကောင်းသင်သည်တတ်နိုင်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ရွေးချယ်မှုများရှင်းပြ / ရှုပ်ထွေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စီစဉ်ရန်ကြိုးစားရန်, ထက် “ဝှက်ထား” သူတို့ကို.
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, အဲဒီရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်နှင့်လူများငါတို့လမ်းကို Transposh သုံးပြီးပုံမှန်ဘာသာပြန်ချက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်လျှင်, သူတို့ကိုငါမပါဘဲတာဝန်နှင့်သုံးစွဲဖို့ဖြင့် Transposh ခက်ခဲသူတို့ကိုမရှိမဖြစ်ရှာတွေ့မယ်လို့. အဘယ်ကြောင့်လူတွေပိုပြီးသူတို့ကိုထမဖွင့်?
ဤနေရာတွင်အငြင်းပွားစရာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်, ဒါပေမဲ့ “အဲ့တာကိုရိုးရှင်းအောင်ထား” ကြှနျတေျာ့ပူခလုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်. ဝမ်းနည်းပါတယ်, သင်ကဝင်တိုက်! 😉
ဇွန်လ 24, 2011 တွင် 5:59 ညနေ
ဒီ mod အတွက်မြေပုံအညွှန်း add ဖို့ဘယ်လို?
ဇွန်လ 24, 2011 တွင် 7:55 ညနေ
ဇွန်လ 25, 2011 တွင် 12:01 ညနေ
ဤသည် patch ကိုငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ကြဘူး. ကိုယ့်မြေပုံအညွှန်း-core.php upload နှင့်မြေပုံအညွှန်းပြန်လည်တည်ဆောက် click နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ “XML ကိုမြေပုံအညွှန်း Generator ကို” ကပြောပါတယ်:
# နောက်ဆုံးပြေးပြီးအောင်မပြုခဲ့! ဒီတစ်ခါလည်းသင် PHP ကို ​​script များများအတွက်မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်အချိန်ကန့်သတ်မြှင့်လို့ရပါတယ်. ပိုမိုသိရှိရန်
# ဇာတ်ညွှန်း၏နောက်ဆုံးလူသိများမှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှု 36MB ခဲ့သည်, သင့်ရဲ့ဆာဗာ၏ကန့်သတ် 256M ဖြစ်ပါသည်.
# ဇာတ်ညွှန်း၏နောက်ဆုံးလူသိများကွပ်မျက်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည် 133.07 စက္ကန့်, သင့်ရဲ့ဆာဗာ၏ကန့်သတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် 120 စက္ကန့်.
# အဆိုပါဇာတ်ညွှန်း post ကိုအရေအတွက်ကိုပတ်လည်မှာရပ်တန့် 1716 (+/- 100)
ဇွန်လ 25, 2011 တွင် 12:09 ညနေ
ငါသာ script ကိုများအတွက်အချိန်ကန့်သတ်ပြုစုပျိုးထောင်သို့မဟုတ်ဗားရှင်းရွေ့လျားအကြံပြုနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ4ကြောင်း plugin ကို၏
ဇွန်လ 30, 2011 တွင် 12:50 ညနေ
ဇွန်လ 30, 2011 တွင် 11:57 ညနေ
ဒီမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား, ဖြစ်ကောင်းအချို့အနာဂတ်ဗားရှင်းအတွက်လာမယ့်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့ interface ကိုရှိသင့်ပါတယ်🙂
ဘာရတ် Balegere ကပြောပါတယ်
ဇူလိုင်လ 4, 2011 တွင် 4:07 နံနက်
Hypercache နှင့်သဟဇာတ Transposh Is?
ငါစူပါ cache ကိုကျော် Hypercache သုံးပြီးပိုနှစ်သက်.
Hypercache ဈ Transposh များအတွက်အသုံးပြုရန်ဖို့ဘယ်လို cache.But invalidating များအတွက်ရွေးချယ်စရာအများကြီးမသိရပါဘူးထားပါတယ်.
ဇူလိုင်လ 4, 2011 တွင် 1:12 ညနေ
ငါသည်ဤစမ်းသပ်ပြီးဘယ်တော့မှ, ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ, ခန့်မှန်း, မှားနေသော၏မရှိခြင်းဘာသာပြန်ချက်တချို့ reposting ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်စမ်း, သင့်ရဲ့မိုင်အကွာအဝေးကွဲပြားပါလိမ့်မယ်
Little ကအနီရောင်ဖား ကပြောပါတယ်
ဇူလိုင်လ 11, 2011 တွင် 11:45 နံနက်
ငါချင်ပါတယ်2မေးခွန်းများကို…
1) တစ်ခါတလေအင်္ဂလိပ်၌ငါ့ပို့စ်များကိုရေးသားဖို့ချင်ပါတယ်, ပြီးတော့ပြင်သစ်သို့သူတို့ကိုငါဘာသာပြန်ဆို, တခါတရံထိုအခါပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့သူတို့ကိုငါဘာသာပြန်ဆို. ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှင့်မည်သို့?
2) ငါသည်ငါ့ပို့စ်များကိုဘာသာပြန်ဆိုနိုင်မှတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ချင်ပါတယ်နှင့်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပေါ်လာဖို့မထို option ချင်ပါတယ်. ဤတွင်နောက်တဖန်, ဒါဖြစ်နိုင်လို့လား, နှင့်မည်သို့?
ဇူလိုင်လ 12, 2011 တွင် 11:46 ညနေ
1. သင်သည်သင်၏ပို့စ်များအတွက် tp_language meta သုံးစွဲဖို့လိုအပ်
2. admin ရဲ့့သတ်မှတ်ထားဘာသာပြန်ချက်ခွင့်ပြုချက်, သင့်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများပေါ်တွင်မဟုတ်သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူများအတွက်ကပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
ဇူလိုင်လ 14, 2011 တွင် 10:15 နံနက်
ငါသည်သင်တို့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမေးမွနျးခဲ့ကြ, ဒါပေမယ့်မည်သည့်ပြန်ကြားချက်ကိုမရကြဘူး. ပင်, သငျသညျငါ့အလိုရှိသမျှမှတ်ချက်များကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြ.
ငါ plugin ကို install လုပ်ထားကြပါပြီ, အောင်မြင်စွာဝစ်ဂျက်ကို config ကို add. သို့သော်, ကိုယ့်တိကျတဲ့ဘာသာစကားဖို့ကိုနှိပ်ပါသည့်အခါ, ဒါကြောင့်အမှားတစ်ခု:
“အကြောင်းအရာ Encoding မှားယွင်းနေသည်
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ site ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, ငါ့ကိုသင့်အဖြေကိုသိပါစေကျေးဇူးပြုပြီး.
ဇူလိုင်လ 19, 2011 တွင် 2:09 နံနက်
ငါသည်သင်တို့ကိုဤမျှလောက်များစွာသောကြိမ်မေးလ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြ, သင်အချိန်ဖို့အချိန်ကနေအဖြေကိုရဖို့လိုလျှင်မှတ်ချက်များအလုပ်လုပ်အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုကျေးဇူးပြုပြီး, သငျသညျအရေးပါမှုဘာမှဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါလျှင်ငါသည်လည်းအခြိနျမှနျမှသင့်ရဲ့ spam များကို folder ကိုအကြောင်းအရာစစ်ဆေးနေအကြံပြုမယ်လို့, မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို – သင်ရုံဒီမှာအကြောင်းပြန်တယ်, gzip ပြဿနာ, ဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့ site ပေါ်တွင်တစ်ဦးပြဿနာ setting ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွဲလွဲ plugin ကိုနှင့်အတူ
ဇူလိုင်လ 18, 2011 တွင် 5:06 ညနေ
ငါ့အဘို့က plugin ကိုနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည် “gzip ချုံ့”. ဒါကြောင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့က disable လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ
ဇူလိုင်လ 23, 2011 တွင် 7:19 ညနေ
Transposh နှင့် Ilyo ရဲ့ဖြေကြားမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
ကိုယ့် gzip ချုံ့ enable သောအခါငါမသိရပါဘူး, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးက wp စူပါ cache ကိုသို့မဟုတ် w3 စုစုပေါင်း Cache ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွင့် ? ယခုမှာ, ဘယ်လိုငါက disable နိုင်ပါတယ်? ကူညီပေးပါ!
နောက်ထပ်မေးခွန်း, ငါသည်လည်းအခြား site ကိုမှဒီ plugin ကို install လုပ်ထားကြပါပြီ, ဒါဟာရှေ့တော်၌ကောင်းသောခဲ့. သို့သော်, မနေ့ကကနေ, ကိုယ့်တိကျတဲ့ဘာသာစကားဖို့ကိုနှိပ်ပါအခါတစ်ဦးအလွတ်စာမျက်နှာပေါ်ထွန်း. ဒါကြောင့်ပြဿနာကဘာလဲ?
ဇူလိုင်လ 28, 2011 တွင် 10:38 နံနက်
တကယ် gzip ပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူအများကြီးသင်ကူညီမပေးနိုင်, ဒီကျနော်တို့သတိထားမဟုတ်သည့်ကွဲလွဲ configuration များနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါတယ်.
အဆိုပါကွက်လပ်စာမျက်နှာများ? php မှတ်ဉာဏ်န့်သတ်ချက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ပြေလည်ခံရဖို့ရှိပါတယ်.
ဇူလိုင်လ 28, 2011 တွင် 9:50 နံနက်
ဘယ်အချိန်မှာကျနော်တို့များအတွက် update ကိုရကြဘူး 3.2.1?
ငါသည်သင်တို့၏ဘာသာပြန်ခြင်း-Plugin ကိုကြိုက်နှစ်သက်နှင့်ငါ့နောက်ဆုံးပေါ် WP-ဗားရှင်းက install လုပ်ချင်ပါတယ်
ဇူလိုင်လ 28, 2011 တွင် 10:32 နံနက်
ကောင်းစွာ, ကအလုပ်လုပ်တယ် 3.2.1. ဤ site ပြေးနေသည် 3.2.1, ငါမကြာမီလုံလောက်စွာအဆိုပါ readme.txt ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ခန့်မှန်း.
ဇူလိုင်လ 29, 2011 တွင် 1:47 ညနေ
အိုကေ… သေတာပဲ။. ကြှနျတေျာ့ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ (mondeo – Hawk-ဆောင်ပုဒ်ထဲကနေ) အဆိုပါ backend အပြီးအပိုင်ဘာသာပြန်ထားသောလိမ့်မည် doesn't အလုပ် .Only ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့် frontend ထဲမှာအလုပ် doesn't 🙁
ဇူလိုင်လ 29, 2011 တွင် 1:53 ညနေ
အိုကေ, အားလုံးပြန်… ယခုငါကရရှိပါသည်.
ငါသည်သင်တို့၏ plugin ကိုကိုချစ် !!!
နှစ်ဆ post ကိုများအတွက်စိတ်မကောင်း…
ဇူလိုင်လ 29, 2011 တွင် 3:50 ညနေ